Faminaniana momba ny ririnina 2017 sy 2018 oviana no manomboka ny ririnina? | Meteorolojia amin'ny tambajotra
Ny ririnina dia vanim-potoana iarahanay matetika amin'ny tontolo mangatsiaka sy misy lanezy, sery, fanatanjahan-tena amin'ny oram-panala. Saingy toa mihalava tsikelikely ny fararano, rehefa afaka andro vitsivitsy dia tonga ny mari-pana ambany, nefa vetivety dia mandalo izy ireo ary miverina ny lohataona. Aiza ary, izany hatsiaka izany izay nampangovitra antsika isaky ny nivoaka teny amin'ny arabe isika? Toa tsy toy ny teo aloha intsony aza ny onja mangatsiaka ananantsika ankehitriny.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hanao famerenana momba ny ririnina 2017 isika, ary ahoana izany amin'ny taona vitsivitsy ho avy. Rahoviana no miditra ny ririnina? Andao hojerentsika izany.
1 Rahoviana no miditra ny ririnina?
2 Famintinana ny ririnina 2017
3 Famintinana ny ririnina 2016
4 Hanao ahoana ny ririnina 2018? Ary ny manaraka?
Rahoviana no miditra ny ririnina?
¿Rehefa manomboka ny ririnina? Ny ririnina dia vanim-potoana andrasan'ny maro. Aorian'ny fahavaratra mafana be dia matetika ny faniriana dia ny fahatongavan'ireo volana mangatsiaka indrindra amin'ny taona faran'izay haingana. Na dia afaka mitondra antsika ny aretina hafahafa aza izy ireo, toy ny gripa na sery, mandritra io vanim-potoana io dia tena te-hivoaka eny amin'ny arabe na ambanivohitra isika ary hankafy ny fanatanjahan-tena amin'ny ririnina.
Fa oviana no miditra ny ririnina? TSARA dia hiankina amin'ny hemisphere ny planeta aiza ianao . Raha any amin'ny hemisphere avaratra ianao dia ny 20 na 21 desambra no andro ofisialy voalohany, raha any amin'ny hemisphere atsimo ianao dia 20 na 21 Jona izany andro izany.
Famintinana ny ririnina 2017
Araka ny tahirin-kevitra an'ny masoivohom-panjakana Meteorolojika (AEMET) ny ririnin'ny 2017 nanana toetra mafana sy maina amin'ny ankapobeny. Ny mari-pana salan'isa dia 8,5 0,6.C, izay 1981 averageC mihoatra ny salan'isa ho an'ity vanim-potoana ity, ka ny 2010-1965 no vanim-potoana voatondro. Ririnina mafana mafana indrindra fahatelo ambin'ny folo nanomboka tamin'ny 2015, ary ny mafana indrindra fahefatra hatramin'ny nanombohan'ny taonjato faha-16, tao aorian'ny 2000-01, 2007-08 ary XNUMX-XNUMX.
Nisoratra anarana izy ireo anomaliana hafanana tsara manodidina ny + 1ºC any Galicia, Catalonia, ny Nosy Balearic, ny Vondronosy Valenciana, ary koa ny rafitra Cantabrian, Iberian ary Central, atsimo atsinanan'ny Castilla-La Mancha ary atsimo andrefan'ny Castilla y León. Any amin'ny faritra sisa amin'ny firenena, ny anomalie dia ratsy, teo anelanelan'ny 0 sy -1ºC.
Raha miresaka ny rotsakorana isika, dia maina izany amin'ny ankapobeny. miaraka amin'ny rotsak'orana 20% latsaka noho ny mahazatra, izay 160mm. Ny volana desambra sy janoary dia maina, fa amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny saikinosy sy ny nosy Balearic dia mando be. Tany amin'ny Nosy Canary, Extremadura ary afovoan'Andalusia dia maina na maina be.
Famintinana ny ririnina 2016
Ny ririnina 2016 dia nanomboka ny 22 desambra 2015 ary nifarana tamin'ny 20 martsa. Volana vitsivitsy nahaliana izany, izay noraketina an-tsoratra, samy orana sy maripana.
Araka ny vinavinan'ny AEMET, antenaina fa any amin'ny tapany avaratry ny saikinosy dia avy ny orana mihoatra ny mahazatra, ary any amin'ny faritra sisa amin'ny firenena dia hijanona ao anatin'ny fetra ara-dalàna ny orana. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha matetika tsy orana any amin'ny faritra misy anao dia tsy hisy fiovana lehibe ihany koa amin'ity taona ity. Izany no izy.
Efa tamin'ny 11 Janoary 2016 no noresahinay a tafio-drivotra mahery izay nahatonga korontana nanerana ny avaratra, indrindra any Pontevedra, Lugo ary A Coruña. Nandritra ny andro maromaro dia tsy nitsahatra ny firotsahan'ny orana, ny tondra-drano tondra-drano ary niteraka ny fihotsahan'ny tany, ny fahatapahan'ny fifamoivoizana ary koa ny tondra-drano. Tamin'ity volana ity, ny rotsak'orana dia 90mm, 41% mihoatra ny mahazatra (63mm).
Tamin'ny volana Febroary dia nisy tafio-drivotra iray hafa izahay, miaraka amin'ny onja hatramin'ny 11,95km ary ny rivotra izay nifofofofo mafy, hatramin'ny 170km / ora tany avaratra. Tamin'ity indray mitoraka ity, ny faritra tena iharan'izany dia San Sebastián, ankoatran'i Galicia. Fa nilatsaka be ny orana nanerana ny avaratra. Ity volana ity dia tena mando amin'ny ankapobeny, miaraka amin'ny rotsak'orana 88mm (sanda 66% avo kokoa noho ny mahazatra, izay 53mm).
Diabe ny orana dia nijanona tamin'ny sanda ara-dalàna, afa-tsy ny quadrant atsimo atsinanana sy ny Nosy Balearic, izay ambany kokoa.
Araka ny filazan'ny AEMET, izay toerana handatsahany orana mihoatra ny nandrasana, dia toerana hijanonan'ny mercury ao amin'ny thermometer amin'ny sanda ara-dalàna; kosa, amin'ny ambiny amin'ireo vondrom-piarahamonina dia mety hisy 55% ny hanana ririnina mafana kokoa noho ny mahazatra. Marina izany
Amin'ny ampahany betsaka eny. Tamin'ny volana Janoary ny mari-pana dia 9.5ºC (2,3ºC mihoatra ny mahazatra, maka ny 1981-2010 ho vanim-potoana voatondro), ka lasa mafana indrindra nanomboka tamin'ny 1961. Tany amin'ny tapany avaratra atsinanan'ny saikinosy sy ny faritra sasany tany atsimo, somary ambany kokoa ny anomaly ara-pahasalamana, tamin'ny 1ºC.
Tamin'ny volana febroary, tany amin'ny antsasaky ny saikinosy, ny Nosy Balearic ary amin'ny faritra sasany amin'ny nosy Canary, dia teo anelanelan'ny mari-pana 0,5 sy 2,5ºC ambony (vanim-potoana referansa: 1981-2010). Any amin'ny faritra sisa any Espana, ny soatoavina dia nijanona ho normal na somary ambany ihany, indrindra ny faritra be tendrombohitra any amin'ny Tendrombohitra Cantabrian, Sierra Morena, Sistema Central ary Sistema Béltico. Ny mari-pana ambony indrindra dia 0,2ºC ambony, ary ny mari-pana farafahakeliny 1,2ºC ambony noho ny mahazatra, noho izany ny oscillation hafanana diurnal dia ambany amin'ny tokony ho izy.
Tamin'ny volana martsa, nitohy nihoatra ny sanda ara-dalàna ny mari-pana, indrindra amin'ny antsasaky ny atsinanan'ny firenena, ao anatin'izany ny nosin'i Balearic, ny quadrant atsimo andrefana ary ny Nosy Canary. Ao amin'ny quadrant avaratra andrefana dia tsy nisy fiovana lehibe.
Hanao ahoana ny ririnina 2018? Ary ny manaraka?
Na dia anio (11 Jolay 2017 aza) dia mbola somary aloha kokoa ny hahafantatra hoe hanao ahoana ny ririnina manaraka, azo inoana fa mitovy izy io na tena itovizany tamin'ny nolalantsika, miaraka amin'ny mari-pana 8-9ºC eo ho eo, fa mandra-pahatongan'ny vanim-potoana akaiky sy tsy hivoaka ireo maodely momba ny faminaniana, dia ho sarotra ny hahafantatra amin'ny fahatokisana kely.
Raha raisina izany, araka ny vinavina, ny taona 2016 no ho mafana indrindra amin'ny tantara, mihoatra ny 2015 aza, ary izany ny tranga El Niño dia hanampy ny mercury amin'ny thermometers hitombo hatrany, mety hahatratra ny maripana antonony 1,14ºC. Midika izany fa hanana ririnina isika mihamafana sy main-tany, indrindra any amin'ny faritra Mediteraneana.
Na izany aza, El Niño dia mihetsika hatrany eo anelanelan'ny 8 sy 10 volana, ka raha manomboka tsikaritra ny vokany amin'ny Novambra 2015, dia azo inoana (tsy azo antoka) fa amin'ny volana septambra 2016 dia handeha amin'ny dingana tsy miandany isika. Saingy tsy midika izany fa tsy antenaina ny mari-pana firaketana, nanomboka teo ny fiakaran'ny marin'izao tontolo izao dia tranga iray izay tsy hijanonaRaha tsy misy fepetra tena mandaitra entina hampihenana ny famoahana entona mandoto ny rivotra, dia tsy hijanona mandoto ny planeta koa ny olombelona manomboka iray andro ka hatramin'ny ampitso. Ary na izany aza, 10.000 taona dia mbola tsy maintsy nandalo vao tafarina ny planeta.
Noho izany, angamba miaraka amin'ny Krismasy maina be isika, ary mafana indrindra, eo ambanin'ny lanitra manga izay hanana fifantohana ambony kokoa amin'ny gazy entona, toy ny dioksidan'ny karbaona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Meteorolojia amin'ny tambajotra » Meteorolojia amin'ny tambajotra » mialoha » Hanao ahoana ny ririnina?
Omar sanchez dia hoy izy:
Zava-dehibe ny fahalalan'ny mpamokatra amin'ny firy? I WINTER dia hiditra
MBA HAHASITRANA NY FIJIANA
Valiny tamin'i Omar Sanchez
Ireo tantsaha, ary koa ireo mpankafy zaridaina, dia tsy maintsy mahalala ny toetrandro any amin'ny faritra misy azy ireo hahafantarana izay azony ambolena. Miaraka amin'ity fiakaran'ny maripana ity dia miharihary izany izao.
edward lopez dia hoy izy:
afaka mampiakatra orana any Espana ve ny fiovan'ny toetrandro?
Mamaly an'i eduard lopez
Fa ny mifanohitra amin'izay no izy, afaka nihena izy ireo. Raha ny marina, any amin'ny Mediterane, ohatra, dia efa nihena 27% izy ireo ary antenaina hitohy hihena. Nisy lahatsoratra iray navoaka tao amin'ny diary Natiora momba ny fomba hiovan'ny rotsakorana noho ny fiovan'ny toetrandro. dia East.
Monica, noraisiko avy tao amin'ny lahatsoratranao ireto fehezan-teny ireto: «... ny fiakaran'ny marin'izao tontolo izao dia tranga iray izay tsy hijanona, raha tsy misy fepetra tena mandaitra hampihenana ny famoahana entona mandoto ao amin'ny atmosfera, ary tsy hisy koa ny olombelona hampitsahatra ny fandotoana ny planeta manomboka amin'ny iray andro ka hatramin'ny manaraka. Ary na eo aza izany dia mbola mila 10.000 XNUMX taona vao ho tafarina ny planeta…. ».
Amin'izay nolazainao dia manakaiky ny faran'izao tontolo izao satria ny jamban'ny mpitondra manerantany dia tsy mampiato ny famoahana entona mandoto ary hitombo sy hitombo ny maripana antonony manerantany mandra-pahatonga antsika ho endasina ara-bakiteny. Hanjavona ny ranomasina ary tsy ho vita ny fiainana an-tanety. Ianao koa dia manamafy fa amin'ny tranga hypothètical hoe mitsahatra tsy mamoaka entona mandoto ny atmosfera ny zanak'olombelona dia maharitra 10.000 XNUMX taona vao tafarina indray.
Tsy fantatro raha tsapanao ny haben'ny fanambarana nataonao fa mampitahotra olona izy ireo. Manantena aho fa tsy taitra ny vahoaka amin'ny fanambaranao.
Lazao fotsiny araka ny fahalalana kely ary araka ny ririnina farany ary ny hafanan'ny fahavaratra amin'ity ririnina ity dia hatsiaka ary any amin'ny faritra sasany dia hahita oram-panala isika
Mety milay izany, eny. Ho hitantsika eo.
Varotra sy mpandainga daholo ianareo, maro ny fiakaran'ny maripana fa tsy misy resaka cheamtrails. Fa oviana ianao no hampijanona ny olona hahatsiaro tena ho meloka sy hanameloka ny governemanta misy anao….
THE BROWN dia hoy izy:
Ity dia tranokalan'ny toetr'andro fa tsy an'ny politika.
Valio amin'i ELPARDO
MTT dia hoy izy:
Ho gaga aho raha mangatsiaka be ity ririnina ity, mihoatra ny zava-drehetra satria manana vitsivitsy hazavana be isika ... ary tsy dia mangatsiaka loatra izany, amin'ny farany dia isika no Mediterane tropikaly
Valiny amin'ny MTT
Ny maripana Espaniola antonony dia mety hiakatra somary somary kely, saingy ho hitantsika eo.
Aza manova ny toetr'andro fa ho hitanao fa avy ny orana
Mazava ho azy, raha tsy nandoto isika, dia ho hafa be ny toetrandro. Miarahaba an'i Luis.
Debora dia hoy izy:
Manantena aho fa mangatsiaka be any Andalusia izay main-masoandro hatrany ary efa reraky ny hafanana mangatsiaka be aho
Valiny tamin'i Debora
Tsy andrinao ny hifaranan'ny fahavaratra, huh? heh heh Manantena aho fa milay izany farafaharatsiny.
dwarfs dia hoy izy:
Io 2016 io ve no ho fahavaratra mafana indrindra amin'ny tantara? Eny, tsy hisy izany, tamin'ny 2015 isika dia natsatsika teto Murcia fa ity taona ity dia tsy manakaiky ny tamin'ny taon-dasa, manala andro mangatsiaka miaraka amin'ny maripana avo kokoa, fa ny mahazatra antsika eto amin'ny fahavaratra, tsy haiko akory voamarikao ve.
Mamaly an'i nani
Amin'ny teboka maro dia nangatsiaka kokoa noho ilay teo aloha izy, marina izany. Any amin'ny toerana ipetrahako (Mallorca), mahafinaritra ihany koa ny fahavaratra, nandany alina maromaro aza izahay tsy nisy mpankafy. Fa ny salan'isan'ny salanisan'ny planeta dia mitombo hatrany.
Miquel Vidal Barcelo dia hoy izy:
Salama Monica avy any Mallorca, marina ny anao, malemy ny fahavaratra nefa maty mangetaheta ireo hazo!
Mampalahelo ny rehetra
Valiny tamin'i Miquel Vidal Barcelonaó
Raha marina. Saika tsy nisy orana ary ny orana vitsivitsy nilatsaka dia etona avy hatrany. Enga anie ka avy ny orana amin'ny fararano.
fanontaniana ve mangatsiaka ve amin'ity ririnina ity? mihoatra ny teo aloha?
salama fanontaniana fa ho mangatsiaka kokoa noho ny farany ity ririnina ity?
Azo inoana fa io oram-panala ririnina io any Madrid? (Satria ho mangatsiatsiaka kokoa)
Misy vintana bebe kokoa ve amin'ity oram-panala ity any Madrid amin'ity taona ity? (Manantena aho SNOW), nolazaiko izany satria araka ny filazanao azy dia mety ho mangatsiaka kokoa ... antenaiko SNOW hahahahaha
Hanao ahoana ity ririnina ity any Dallas Tx?
Tsy azo atao ny mahafantatra mazava tsara hoe amin'ny firy ny 3-4 volana. Ny fantatra dia hoe, raha mavitrika ny tranga La Niña dia hangatsiaka i Amerika Avaratra. Raha ny marina dia mety hisy oram-panala lehibe any amin'ny tanàna toa an'i New York.
Any Espana dia tsy fantatra izay ho fiantraikan'io trangan-javatra io, raha mihetsika izy. Fa ny zavatra ara-dalàna (na ny mahazatra) dia rehefa avy ny ririnina mafana dia tonga ny hatsiaka na mangatsiaka be, indrindra raha nahatratra soatoavina mahazatra na mihoatra ny ankehitriny ny mari-pana amin'ny fahavaratra ary amin'ity taona ity.
Raha vantany vao mahalala bebe kokoa izahay dia hampahafantatra anao izahay.
Sandra Naharro Gomez dia hoy izy:
Salama, tena tsara, ahoana aho Sandra ary tena liana amin'ny lohahevitra ririnina monina any Barcelona aho ary tiako ho fantatra raha ho vaovao na tsia? Na raha farafaharatsiny milatsaka mihoatra ny mahazatra ny oram-panala amin'izao fotoana izao fa manana orana bebe kokoa noho ny mahazatra isika, aza manahy raha tsy mahazo tsara ianao satria sarotra be ny toetrandro, arahaba
Valiny tamin'i Sandra Naharro Gómez
Tsy hay atao izay hahafantarana ny toetrandro, farafaharatsiny azo antoka.
Tsy maintsy miandry isika raha mihetsika ny trangan-javatra La Niña, ary jereo raha any Espana no mahatsikaritra izany na tsia.
Raha ny tena izy dia miahiahy aho fa ny oram-panala mihoatra ny mahazatra any atsinanan'ny saikinosy sy ny Nosy Balearic. Ny rivotra mahery dia tsy maintsy avy any Avaratra (Siberia, ohatra) mba ho mangatsiaka any Mediterane isika, izay antsoina hoe hatsiaka, izany hoe, mari-pana latsaka ny -4ºC no voarakitra.
Jereo, mety ho mangatsiaka kokoa ity ririnina ity, ririnina lasa iny nafana na dia nisy aza ny rivotra mangatsiaka tonga ary nilatsaka ny oram-panala, saingy tsy tahaka ny tamin'ny 2015 aho dia mipetraka amin'ny tanàna iray any Aragon 150 metatra miala ny haavon'ny ranomasina ary manana aho nahita oram-panala mavitrika tamin'ny faha-16 taonako ..
Miresaka betsaka momba ny fiakaran'ny maripana eran-tany izy ireo saingy tsy milaza izy ireo fa ao anatin'ny vanim-potoanan'ny ranomandry kely isika. Mangatsiaka ny hatsiaka ny ririnina, indrindra any Amerika Avaratra sy Eropa ary Azia ...
Grijander dia hoy izy:
Fa inona no lazainao ry Victor.
Tsy fantatrao ... mahatsiravina ianao
Valiny tamin'i Grijander
Te hahafantatra aho raha hisy orana betsaka amin'ity ririnina fararano ity. Misaotra betsaka
Raha ny marina dia hiteny aho hoe eny, saingy tsy azonao fantarina tsara izany. Hiankina amin'ny faritra aiza amin'ny firenena onenananao, ny haavony, ny rivotra, sns.
Hampahafantatra izahay 🙂.
Salama, avy any Torre Pacheco any amin'ny faritanin'i Murcia aho ary tiako ho fantatra raha toa orana ara-dalàna ny orana. Ary raha ny mari-pana ambanin'ny salan'isa dia ho voarakitra ao anaty tontolo ririnina. Ary tiako ho fantatra ihany koa raha toa io fararano io dia avo ny mety hisehoan'ny DANA mangatsiaka mangatsiaka, misaotra.
Mampalahelo fa tsy azonao fantarina tsara izany.
Azo inoana fa ho cool izy io, ary ny soatoavina ara-dalàna na somary avo ny rotsakorana dia ho voarakitra ao amin'ny firenena, saingy tsy misy azo faritana raha tsy efa lasa ny fotoana.
Inona ny toetr'andro amin'ny fararano atsimo atsinanana? Huelva Seville Cadiz sy Badajoz
c dia hoy izy:
Salama, matahotra aho ary tototry ny olan'ny haintany sy fiovan'ny toetrandro, avy any amin'ny tanàna iray any Sierra de Huelva aho, Aroche ary tiako ho fantatra raha hisy orana isika amin'ity fararano ho avy ity, raha ririnina mahazatra na tsy maintsy manomboka isika manahy. Fiarahabana avy amin'ity tanànan'i Huelva mahafinaritra ity.
Salama, ririnina andrasana any Sierra Nevada, nafana tokoa ny lasa fa tsy ny = ====
Jerome dia hoy izy:
Salama maraina, hanao ahoana ity ririnina ity any Navarre? Ho avy mihoatra ny orana ve ny orana? Antenaina fa ho toy izany
Valiny tamin'i Jeronimo
Salama Monina ao amin'ny tanànan'i Sagunto aho, tanàna iray any Valencia. Reraka tanteraka aho tamin'ity hafanana tamin'ny taona lasa ity sy ny ririnina any Chichinabo. Sady tsy mangatsiaka no tsy orana. Amin'ny ankapobeny ny hamandoana mangatsiaka miditra amin'ny taolana. Ny nametrahan'izy ireo ahy tao anaty vatasarihana an'ny mpiray tsikombakomba, tena reharehako! Marary aho amin'ireo lalana simika mahavariana izay manapaka ny orana rehefa misy rahona mainty geandes saika orana (hitako ny masoko) tena reraka sy malahelo aho indrindra ho an'ny taranaka vaovao 🙁
miguel angel sanchez lamuela dia hoy izy:
Salama, avy any amin'ny tanàna iray any Aragon aho manokana Almonacid de la Sierra ary miahiahy momba ny fiovaovan'ny toetrandro mihoatra ny mety. Mihena ny orana, amin'ity taona ity dia misy haintany mahatsiravina, maina ny loharano, maina ny vokatra. Tsaroako fony aho mbola kely fa be ny orana noho ny ankehitriny, ary nilatsaka ny oram-panala noho ny ankehitriny. Ny tsy fantatro dia raha io toetran'ny fahatanorako io no nitondra na naningana. Tsy hanontany momba ny vinavinan'ny fararano aho satria tiako ity zavatra meteorolojia hitako izay mahaliana ity satria sarotra rehefa manao vinavina maharitra. Arotsaho tsara ny orana. Tiako fa avy ny orana arahaba.
Valiny tamin'i Miguel Angel Sánchez lamuela
Salama, amin'ny volana novambra dia hanao Camino de Santiago, frantsay aho, azo atao ve ny mahalala ny ora firy any avaratry Espana amin'ny volana Novambra?
Salama, avy any amin'ny tanàna any Valencia aho sahabo ho 20 km. Avy amin'ny morontsiraka… ..ary raha efa henoko ny fanafoanana na ny fisorohana ny orana na ny fisorohana tafio-drivotra. Tsy fantatro hoe hatraiza ny tena marina ary raha tsy izany dia tsy haiko amin'ny fahatsapana fa manao azy ireo .... Misaotra betsaka
francisco javier perez fitaovam-piadiana dia hoy izy:
Hanao ahoana ny ririnina any amin'ny nosy Canary, indrindra any amin'ireo nosy andrefana. Misaotra Monica
Mamaly an'i francisco javier perez fitaovam-piadiana
Mety ho mangatsiaka kokoa noho ilay teo alohan'ny firenena io, ary betsaka kokoa ny orana raha handroaka i La Niña. Fa tsy azonao fantarina tsara.
Salvador Segui dia hoy izy:
Salama maraina, any Valencia amin'ity ririnina ity dia hanana - 3o 4 degre, hanafoana ny citrus ve izany?
Valiny tamin'i Salvador Segui
Tsy azonao fantarina tsara izany. Ny azoko lazaina aminao dia miankina amin'ny voankazo voasary, toy ny voasary na ny voasarimakirana, dia mitazona tsara ny fanala malefaka hatramin'ny -4ºC.
suaoker gaizto dia hoy izy:
Tsaroako tsara fa tamin'ny tve1 tamin'ny faran'ny ririnina lasa teo dia naneho hevitra izy ireo tamin'ny iray amin'ireo tatitra momba ny toetrandro izay nomen'izy ireo fa raha tsy fantatro izay maodely entin'izy ireo, ity ririnina ho avy ity dia hihoatra ny teo aloha, izany hoe, io ririnina ho avy io dia hitovy na nafana kokoa aza ……… .. Manantena aho fa diso izy ireo
Mamaly an'i suaoker gaizto
Aleo manantena. Ho hitantsika eo anefa izay mitranga.
Salama Andriamatoa: Mónica Sanchez Te hanontany fotsiny aho raha hilatsaka amin'ny ranomandry amin'iza amin'ity taona ity ny faritr'i Lagunera
Te hanontany fotsiny aho 🙂
Salama! Ramatoa Monica, faly aho fa liana amin'ny toetrandro ny olona marobe, liana ihany koa aho ny hipetraka ao Tijuana Baja California Norte ary tena maina amin'ny hafanana, orana kely, nandritra ny taona vitsivitsy dia tsy nilatsahan'ny orana tahaka ny taloha ary tamin'ity fahavaratra ity dia nitombo mihoatra ny mari-pana ara-dalàna. Manantena izahay fa avy ny orana satria ilaina ny rano. Salama.
Fibre dia hoy izy:
Salama Ramatoa Monica, ny fanontaniako matotra amin'ity fahavaratra ity dia ny orinasantsika peroviana ve dia hisy orana sa tsia
Valiny amin'i Filber
Salama, manao ahoana ny ririnin'ny fararano any amin'ny faritanin'i cadiz?
Tafandria mandry. Manana oram-baratra mahery any Barcelona isika miaraka amin'ny fitaovana elektrika marobe, izay nijanona tampoka tamin'ny tanàna nandritra ny 5 ora farafaharatsiny ary mitohy. Ny marina dia ankasitrahana aorian'ny septambra mafana sy maina be, miaraka amin'ny firaketana ny mari-pana, na eo aza ny fahavaratra amin'ny ankapobeny tsy dia mafana loatra.
Amin'ny ririnina manaraka?. Iza no mahalala.
Mazava fa mihabetsaka ny fantatra momba ny klimatolojia, ary ankehitriny miaraka amin'ny tsy manam-petra fitaovana izay ananantsika amin'ny Internet, ho fanampin'ny fampahalalana tsy tapaka. Tsy mitsahatra mahita ny maodelin'ny toetrandro misy vinavina amin'ny fotoana rehetra isika, eny fa na dia ny maodelin'ny toetrandro izay manamarika ny fironana 9 volana mialoha, miaraka amin'ny fivoaran'ny rafitry ny atmosfera iray isaky ny 6 ora.
Saingy tsy miantoka na inona na inona izany rehetra izany, raha ny marina dia manampy antsika fotsiny hahalala na haminavina bebe kokoa momba ny fironana momba ny toetrandro eto amin'ny planetantsika, solosaina lehibe izay efa nalaminay. Saingy ny toetr'andro eto an-tany dia mihoatra lavitra noho ny faminavina isa mifototra amin'ny angona voangona ao anatin'ny fotoana fohy dia fohy. Saingy ny Tany dia niova tsy tapaka ny toetrandro nandritra ny 4.500 tapitrisa taona.
Tena marina. Tsy zava-mitranga vaovao ny fiovan'ny toetrandro, fa ampahany amin'ny planeta.
Saingy ankehitriny, noho ny haitao, ny fandotoana ary ny filana manafika ny habaka maintso tavela sisa tavela, afaka mamadika ny toetrandro ny olombelona
Marina izany, ary tsy mbola nisy toy izany teo amin'ny tantaran'ny planeta nisy ny olombelona niditra tamin'ny fiovan'ny toetr'andro. Nandritra ny zato taona mahery izay dia nisy fiantraikany tamin'ny toetrandro isika, faingana tokoa tato anatin'ny folo taona.
Io fitambaran'olombelona io miaraka amin'ireo singa voajanahary toy ny Child-Girl factor na ny tsingerin'ny Solar ankoatry ny maro hafa, dia mahatonga ny hoavin-tsika akaiky ho avy tsy azo vinavinaina, mihoatra ny efa natoraly.
Teôria maro no misokatra izay miainga amin'ny farany hatramin'ny farany, manomboka amin'ny vanim-potoanan'ny ranomandry ka hatramin'ny toetr'andro any an-tany efitra. Fa ny mazava dia ny lafin-javatra misy ny olombelona dia ratsy foana, ny fandotoan'ny planeta azy (Ilay tokana ananantsika) Atmosfera, ranomasina, tany, maloto ny zava-drehetra.
Aretina pesta isika, ny manam-pahaizana indrindra na tsy dia be loatra, ny fiarahamonina tsy afaka mijanona, maro isika, mihamaro hatrany hatrany hatrany no laniana. Tsy mitombo ny planetantsika, dia mihakely sy mihakely izy. Misy ny vinavina izay manombatombana fa amin'ny taona 2050 dia olona 12.500 7.000 tapitrisa isika. Ankehitriny dia 1900 mahery isika ary tamin'ny 1.600 tapitrisa fotsiny isika. Tsy maharitra ny planeta, hirodana ny fiarahamonina.
Tokony hiova be isika ary matahotra aho fa tsy hitranga izany. Tombontsoa be loatra.
Manoro hevitra an'i Ultimatum eto an-tany aho.
Ny fiovan'ny toetr'andro dia tranga iray izay mety hitondra oram-panala, amin'ny fahavaratra mafana be ary isan-taona dia mianatra, onja mangatsiaka amin'ny ririnina sy mahery, izay hahatonga ny oram-panala any Espana izay matanjaka kokoa ary azo atao kokoa amin'ny haavon'ny ranomasina, ny mari-pana ambany amin'ny ririnina, ary fantatrao ny tafio-drivotra, izay any Espaina dia mety ho mahery vaika toy ny any Barcelona, ​​rehefa miditra amin'ny atmosfera ny rivotra mangatsiaka be dia be ny tsy fandriam-pahalemana, ankoatry ny mafana ny ranomasina ...
Raha miteraka rivotra SW any Penisual Ibérica ny fisehoan-javatra La Niña, hanana orana amin'ny ririnina ve isika fa tsy ny lanezy amin'ny haavo avo kokoa any Pyrenees?
Salama, tiako ho fantatra raha hidina ny mari-pana any amin'ny faritanin'i Ciudad Real ary raha toa orana bebe kokoa. Hatramin'izao dia betsaka ny zavatra ilaina satria mahamenatra ny mandeha mamaky ny tendrombohitra sy mahita hazo maina.
Salama Monica :) Ny fanontaniana iray dia tsy mahazaka hafanana sy hazavana aho. Mipetraka any Turis any Valencia aho ary tsy zaka kokoa izany isan-taona. Io hamandoana io ihany no manaparitaka ny taolana ary handrava ny trano amin'ny alalàn'izy ireo azy na dia tsy eo akaikin'ny ranomasina aza.
Narary aho ary noho izany dia nanamafy ilay mpametaveta fa tao amin'ny masoandro tontolo andro izy. Eto ny fahavaratra dia nifarana tamin'ny 31st tany New York tamin'ity taona ity fa nivoaka tamin'ny fampiatoana olona sy diplaoma 27 izahay ary nanomboka ny 7 febroary niaraka tamin'ny 20 degre ary nitombo. Afa-tsy andro vitsivitsy miserana izay nianjera d nitsoka. Ny fanontaniako dia.
Hitako ny vinavinan'ny Cantabrian na koa io fararano io dia efa tonga.
Ka te hahafantatra aho raha misy fiatraikany amin'ny faritr'i Mediteraneana fotsiny ny fiovan'ny toetrandro ary ny sisa tsy dia be loatra ary izany? Eto izahay miaraka amin'ny andrefana. Omaly. Saingy tsy misy na iza na iza milaza izany. Ara-dalàna izany? Satria tsy avy ny orana eto ary efa fahavaratra izao ary tsy hiakatra intsony ny antsasaky ny taona.Hiafara toa an'i Afrika ve isika? Inona izany fa tsy misy fiatraikany amin'izy ireo loatra ilay fanovana ary raha manana orana izy ireo? Valencia dia lasa California California. Avy amin'ny exo any Los Angeles dia misy faritra antsoina hoe Valencia any Santa Clarita ary tsy avy ny orana satria tsy fantatr'izy ireo akory ... Ary nanomboka toy ny fialokalofana tsikelikely aki. Raha misy fiatraikany be ny aki, maninona any amin'ny Ranomasina Mediterane no tsy manomboka mamboly hazo x olona isika tahaka ny nanombohan'izy ireo nanao teo? Any amin'ny faritra afrikanina cokindante ary mazava ho azy ireo fa ny avaratra dia miverina miaina tsy tapaka izy ireo ary ny mponina amin'ireo tanàna ary koa manondraka ny voly famboleny dia manahy ny amin'ireo hazo ihany koa mba tsy hahavery izany toetrandro izany. Misaotra betsaka amin'ny fiheverana. Miarahaba an'i Maria 🙂
Misy fiatraikany amin'ny planeta iray manontolo ny fiovan'ny toetrandro, saingy eny, misy faritra sasany misy fiatraikany lehibe indrindra. Raha ny marina, tao amin'ity bilaogy ity dia naneho hevitra izahay fa ny toetr'andro any Espana dia mety hitovy hatrany amin'ny an'i Maraoka.
Fa maninona ny sasany no efa nanomboka tamin'ny fararano ary ny sasany mbola manana hafanan'ny fahavaratra? Na izany aza, mba tsy hitovizan'ny toetrandro, antony maromaro no mila miditra an-tsehatra: ny toerana, ny haitao, ny haavon'ny haavon'ny ranomasina, ny maripanan'ny ranomasina, ny rivotra, ny taratra amin'ny masoandro, sns, sns.
Raha ny mahazatra, rehefa misy tafio-drivotra miditra avy any avaratra na avaratra andrefan'ny saikinosy, dia mahatratra ny Mediteraneana izany, ary indrindra ny atsimo, satria amin'ireto teboka ireto, rehefa akaiky kokoa ny ekoatera, dia mivantana kokoa ny tara-masoandro, ka ny ranomasina Ny Mediteraneana dia mafana kokoa noho ny an'ny, ohatra, ny Ranomasina Galisiana.
Mikasika ny fanontanianao farany. Tsy haiko izay holazaiko aminao. Maniry aho fa hambolena hazo any amin'ny tanàna sy tanàna rehetra, fa tsy dia ala loatra. Azo antoka fa ho tsara kokoa ny raharaha.
Ny meteorologists Px dia tsy sahy manameloka indray mandeha fotsiny ny fumigations tsy tapaka izay naseho nandritra ny taona maro niaraka tamin'ny tanjona, ankoatry ny hafa, ny fanesorana ny orana amin'ny alàlan'ny fanaparitahana ny iodide volafotsy, ireo izay asthmatic sy Miharatsy hatrany isika noho ny tsy fahazakana noho ny tsy fisian'ny rano izay antsika rehetra
Antigonus Cardedonius dia hoy izy:
Marina fa miova ny toetrandro, efa nataony hatrizay, mazava ny fitaoman'ny olombelona azy. Ankehitriny 100% ny fiovan'ny toetrandro dia antropogenika, ary amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fandefasana entona dia afaka mifehy io fanovana io isika, dia tena mahavariana tokoa. Raha ny masoandro no tena tompon'andraikitra amin'ny toetrandro. Inona no tsy hamoahana entona kely kokoa? eny Azo havaozina bebe kokoa? eny Manova zavatra be dia be? mazava ho azy. Saingy tsy manana izany fahefana hikirakira ny toetr'andro izany izahay, ary aleoko tsy velona intsony rehefa tonga izany.
Etsy andaniny, ny CO2 dia tsy entona mandoto, avelao tsy hampita vaovao diso isika. Ny gazy fiainana, ilay mamelona zavamaniry. Zavatra iray hafa ny hoe misy vokany eo amin'ny toetr'andro.
Valiny tamin'i Antígono Carjedonio
CO2 tsy entona mandoto toa an'i Nox, Co… entona entona izy io.
Hisy oram-panala ve amin'ity taona ity any Soria?
Misaotra Monica noho ny fanazavanao sy ny fanoloran-tenanao. Nameno ny planeta ny olombelona ary mijinja izay nafafanay izahay ... Miaina irery aho, miaraka amin'ny orinasako tsara indrindra, ny saka, ao anaty trano ary miaraka amina am-patana. Tamin'ny 2015, andro vitsivitsy izay mandrehitra afo, amin'ity taona ity dia omena ahy fa hisy vazy apetrako ho firavaka mandritra ny fahavaratra ... Ny saka ahy dia mpamantatra toetrandro mahafinaritra ... miomana amin'ny ririnina foana izy ireo, saingy efa roa taona izay no tena hitako. "Tsy miraharaha" ny hatsiaka. Fiarahabana avy any an-tendrombohitra.
Salama amin'ny 2017 dia hanana ririnina bebe kokoa noho ny fisaorana isika
Valiny tamin'i Oskar
Hangatsiaka toy inona ny amin'ny 2017 fa izay misy antsika. Misaotra
wow faminaniana tena tsara
mpanofa dia hoy izy:
Salama, rahoviana no hanomboka ny ririnina? Sambo simika sy mpandoto ny tanindrazantsika malala tiako ny hatsiaka mangatsiaka mandavantaona ...
Mamaly an'i Locario
Tsy dia manana ambiny firy izy. Amin'ny fiandohan'ny volana oktobra dia antenaina manomboka hidina ny mari-pana any Espana.
Aza matahotra fa tonga daholo ny zava-drehetra. 🙂
Tsy mitovy izany: manana, mahay, mahay MITANA.
Inona no hananana, hanananao POWER
Yggdra dia hoy izy:
Mora tokoa ny mahafantatra raha avy ny orana sa tsia.
Raha manga ny lanitra dia tsy avy ny orana.
Raha manga sy miseho ny rahona, mila mijery fotsiny ianao, raha manomboka mamaky ny lanitra ny fifandonana, ary tsy tiako holazaina ireo fifandonana kely navelan'ny fiaramanidina ara-barotra izay manjavona rehefa mandroso ny fiaramanidina, fa ny fifandonana lava misokatra sy rahona manify no miforona ,,,,, veloma amin'ny orana.
Raha hitanao fa misy rahona ary efa ho avy ny orana ary ho hitanao ireo lalan-drivotra eo anelanelan'ny mazava sy mazava, izay fantatro fa holazainao amiko, momba ny fihoaram-pefy, azo antoka fa hanjavona ireo rahon'ny rano ireo. indray tsy misy orana.
Raha te hanala rahona, iodida volafotsy izy, raha te hampiakatra ny maripanan'ny faritra, aluminium.
Mahagaga fa ity fanao ity dia hita kokoa satria ny Castilla la Mancha dia nanova ny fambolena voaloboka, nijaly tao amin'ny vinalopó izay nihaviako, ary na ny fikambanan'ny tantsaha, mpiompy ary mpiambina sivily an'i Murcia, Alicante, Valencia, Rioja, Nosy Balearic dia manameloka ireo fomba fanao.
Ary raha jerena izay voalaza momba ny CO2, dia nisy fotoana nahatonga ny tany hankafy oxygen efa ho 100%, (mahafaty ny zavamananaina maro be), tamin'izany fotoana izany dia nitombo be ny maripanan'ny planeta, afo be. Tsy nisy zavatra nitombo taorian'izay. Fantatra amin'ny hoe Sahara, ohatra. na tany efitra, amin'ny fotoanan'ny CO2 be dia be, ala mikitroka.
Tsy nino an'io aho. Fa tsy maintsy mijery ny lanitra fotsiny ianao.
Mamaly an'i Yggdra
Heveriko fa ny vinavinan'ny AMT ho an'ny 2017
mpandala ny nentin-drazana kokoa izy ireo noho ny tamin'ny taon-dasa.
Tsy te ho tratra ianao, ara-dalàna tsara ny rantsan-tànanao.
JUAN ANGEL MORENO dia hoy izy:
Burrito! Alohan'ny handraisanao ny fotopampianarana lehibe napetraky ny fanatontoloana dia mandraisa ny tenanao!
Teôlika sandoka fanodikodinana ny fanamafisana ny tany! Fisalasalana foana io! Mampahatezitra!
Avelanao hofehezina ny tenanao, tsy manana hevitra ianao!
Fantatra hatrizay ny marina, nanamafy izany hatrany ny mpahay siansa marina. Ny mpandraharaha voalohany manova ny toetr'andro eto amin'ity planeta ity dia ny fiatraikan'ny kintana manodidina azy eo amin'ny sahan'andriamby.
Ny tsingerin'ny masoandro miasa ambany (ambany indrindra) dia manalemy ny saha, izay mamela ny taratra kosmika hahatratra ny sosona ambony amin'ny habakabaka, ka miteraka azota azota, mpamokatra mpamokatra rahona, manova sy mampanjavozavo ny mangarahara amin'ny atmosfera, mangatsiaka toy izany taona, ny rivotra iainana, manafaingana ny riandranon-driaka ary manova ny làlan'ny onjan-dranomasina. Ity fahalemen'ny magnetisma an'ny tany ity dia misy fiantraikany mahery vaika amin'ny famindran-toerana tektonika, izany hoe mampitombo ny fahanginan'ny planeta, ary koa ny hetsika volkanika.
Ny fisehoan'ny fihenan'ny mangarahara amin'ny atmosfera nateraky ny fihenan'ny masoandro dia efa hita nanomboka tamin'ny taona 2010. Nandeha ny fotoana ampy handresena ny tsy fahampian'ny rano any an-dranomasina amin'ilay tranga vaovao. Miharihary ary manakaiky ny faran'ny vanim-potoana mafana farany teo. Tsy ho toy ny tamin'ny taonjato faha-XNUMX intsony ny toetrandro. Tapitra izany.
Manomboka izao dia tsy azo ihodivirana ny fampangatsiahana raha, araka ny nomanina, ny fihodinan'ny masoandro manaraka ny minima, misesy, izay 95% azo antoka!
Azo inoana mihitsy aza fa izy io dia ny fiandohan'ny fitaratry ny rivotra manaraka, raha vao lasa ity tsingerina mangatsiaka ity, ny faharetany izay tsy latsaky ny roanjato taona, ny lava indrindra ao amin'ny Holocene, ny fironana malemy orbit an'ny tany eo aminy ny axis dia tsy mamela ny taratry ny masoandro hiempo ny lanezy sy ny ranomandry voahangona amin'ny faritry ny latitude avo, satria ireo dia mifanindry loatra amin'ny fanambonin'ny tany, ary ny Tany dia tafiditra ao anatin'ny VATONDRANA 100.000 XNUMX TAON'NY FARITRA!
Valio amin'i JUAN ÁNGEL MORENO
Lainga maloto, 20 taona no nipetrahako tany Madrid, ary mahatsiravina ny toetrandro, voalohany tsy misy lohataona, roa tsy misy fararano, telo na koa Amin'ity taona 2018 ity dia tsy misy fahavaratra, misy lohataona iray, shit, tsy ho ela dia ho tonga Suède na iray amin'ireo firenena nanjary mangatsiaka tanteraka, ho hitanao fa tsy misy ny fiakaran'ny maripana, misy ny fampangatsiahana manerantany; (
ary ny firaisana tsikombakomba rehetra, Chemtrails ary ny fampangatsiahana manerantany, mazava ho azy fa manohana ireo izay namela ny fasirany tamin'ireto lafiny ireto aho, hoy Andriamatoa Juan Angel Moreno, tena marina tokoa, vakio indray izay lazainy
Ny fahavoazan'ny glasy dia tsy mitranga intsony raha tsy amin'ny fahavaratra